Iwu Google AdWords - Soro Iwu Ndị ahụ!
Agbagharala mgbasa ozi ederede gị maka ndebanye aha ederede ma ọ bụ ụghalaahịa? Ọ bụrụ n’ị mere ihe niile n’ụzọ ziri ezi, gịnị kpatara Google na-eji iti mkpu nye gị?
AdWords anaghị agwa gị ozugbo, ọtụtụ mgbasa ozi ederede iji nyochaa n'otu oge. Ha nwere algọridim ha nke gha achoputa ederede ederede gi ma oburu na imeghari iwu ha. Nchọpụta bụ mgbe ọ bụla eziokwu na enweghị ọtụtụ ozi na ihe kpatara ya. Na-akụda mmụọ!
O doro anya na ị na-enweta email enyi na enyi site na LPQ-Support@Google.com nwere akara isiokwu; Akaụntụ Google Mgbasa ozi gị nwere ọtụtụ mmebi! Elegharala ozi email a anya, n'ihi na AdWords ga-gbanyụọ akaụntụ gị ma ọ bụrụ na mmebi ahụ gara n'ihu. Zọ kachasị mma iji zere obi mgbawa a, yana oge ịkwụsị akaụntụ, bụ ịghọta nke ọma amụma Google Mgbasa ozi.
At Mgbe niile, anyị nwere ihu ọma inwe Googler nke anyị dị ka nnukwu ọrụ enyemaka mgbe anyị kwesịrị ịmekọrịta AdWords Policy. N'okpuru bụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị kwesịrị ịbụ isi nke uche maka ndị ọkachamara PPC niile.
Iwu Change Log
AdWords nwere ọkwa dị iche iche nke atụmatụ zuru ụwa ọnụ na nke obodo na-achịkwa ụdị mgbasa ozi ọ bụla enyere. Tụkwasị na nke ahụ bụ na iwu na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro iji kwado usoro ọrụ ụlọ ọrụ a. N'ime ụwa okenye nke ugbu a, ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye usoro ịpịgharị ihe na ihe nchọgharị gị nke ga-eme ka ị mata mgbanwe mgbanwe mgbasa ozi ka ha na-eme? Mara ihe dị na: Google nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ dị jụụ. A na-akpọ ya Iwu Change Log, ma ọ bụrụ na ịmatabeghị ya, ana m akwado itinye akara ibe.
Ọ bụ peeji nke na-edepụta mgbanwe usoro mgbasa ozi ka ha na-eme, ma ọ bụ na ọ ga-adị ntakịrị tupu ịmalite ha. Site n'ime ka ọ mara gị mma iji na-elele oge a, ị nwere ike ịnọ n'ihu usoro ahụ ma gbochie mgbasa ozi ịda na-agbadata n'ihi mgbanwe a na-atụghị anya ya na AdWords Policy.
Okwu Ebumnuche Ebumnuche na Atụmatụ Egwuregwu PPC gị
Isi ihe dị na ya bụ ịmụ otu esi edozi nsogbu atumatu nke ọma, dozie ha ngwa ngwa o kwere mee, ma hazie akaụntụ gị iji gbochie mgbasa ozi ịgbadata n'ọdịnihu.
Mgbe ị na-arụ ọrụ mmezi akaụntụ PPC ọ bụla, ikwesighi ịkwado mgbasa ozi gị niile ma dochie ha na nke ọhụụ belụsọ na ị dị njikere ịnwe ihe niile na-arụ ọrụ maka obere oge.
N'ịghọta nke a, yana eziokwu na ọtụtụ mgbasa ozi ga-enyocha nyocha tupu ị ruo eruo ịgba ọsọ, ị kwesịrị ịtụ anya na enwere ike ịnwe oge (ma ọ bụ n'ihi nyocha ma ọ bụ nkwenye nke mgbasa ozi) tupu mgbasa ozi ọhụrụ gị amalite ma na-agba ọsọ ha nwere ike zuru oke. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụsị mgbasa ozi gị niile, ihe mara mma ị ga-eme bụ ime na-ole na ole nke gị ugbu a na mgbasa ozi elu mgbe ị na-amalite na akaụntụ gị 'ntaghari ohuru.'
Nke ahụ dị mfe, mana ọ bụ ihe ịtụnanya etu mkpalite mgbasa ozi nwere ike isi bute nsogbu mgbe onye njikwa akaụntụ PPC na-eme 'mmiri na-asacha' ihe niile n'oge.
Na United States, ihe mbụ iji rịba ama gbasara AdWords Trademark Policy bụ na ọ naanị na-achịkwa ederede ederede, ọ dịghị emetụta isiokwu. Ka ha na-ekwukarị ugboro ugboro, Google chọrọ ikwe ka ndị mgbasa ozi nwee nnwere onwe dị ka o kwere mee na nhọrọ nke isiokwu ha, yana dịka ndị dị na US ha anaghị enyocha akara ụghalaahịa na isiokwu. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụghalaahịa ma na-ewe iwe na mgbasa ozi onye asọmpi na-egosi mgbe abanyela akara ngosi aha gị na ihe nchọta ọchụchọ Google-ewela iwe, ị nweghịzi ihu ọma.
Ajụjụ na-esote ịza bụ nke otu Google si enyocha azụmahịa na ederede ad. Ọ bụrụ na ịdenyeghị aha ụghalaahịa gị na Google ma rịọ ka ha nyochaa ya, agaghị enyocha akara ụghalaahịa gị.. Oge! N'ihi ihe m chere bụ mmachi nke akụ, Google anaghị etinye aka na nyocha okwu ụghalaahịa iji debe faịlụ maka nlekota, yabụ ị ga-enyerịrị mkpesa TM iji malite usoro nlekota.
Naanị ihe fọdụrụ ugbu a bụ ijide n'aka na ị na-ehichapụ amụma AdWord gị gbasara ụlọ ọrụ ọgwụ. Nke a na otu ihe bit gbagwojuru anya na kwesịrị ya post… nọrọ na-ekiri!
Tags: google adwordsgoogle adwords iwuTụọ CP
Na-enyocha Injin Na-achọ Ọ bụrụ na Use Na-eji Drupal Eme Ihe
Nnukwu Nwanne bu Enyi gi na Facebook
Jul 18, 2011 na 2:14 PM
Naanị gafere akụkọ a n'ụtụtụ a. Ọ ga-amasị m ịkọkọrịta ahụmahụ m na izu gara aga na Google, ma nụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụdị ihe ahụ mere ha…
Adị m ọhụrụ na ọrụ a, naanị na-arụ ọrụ oge niile maka izu 2 (oge oge maka ọnwa 2 tupu nke ahụ). Enwetara m ọnọdụ "ruru eru" site na Google otu izu gara aga.
Izuụka gara aga mgbe m gbasasịrị ngụgụ n'ụkpụrụ azụmaahịa ha maka oge m na-arụ ọrụ ebe a, abịarutere m na nkwụsị ọkwa. Enwere m ọtụtụ mgbasa ozi ọhụụ jụrụ nke na-adịchaghị iche na ojiji nke ụghalaahịa karịa mgbasa ozi ndị ọzọ akwadoro. Ezitere m ozi email, na-arịọ maka nkọwa banyere ihe kpatara na adasaghị mgbasa ozi ndị a ebe ndị ọzọ dị mma.
Dị ka ị kwuru banyere isiokwu, nghọta m bụ na isiokwu ndị a bụ okwu dị iche na ederede ad. Ma mgbe m natara nzaghachi sitere na Google gbasara ajụjụ m, lee ihe ha gwara m gbasara ụfọdụ mkpụrụokwu m nwere na ndị otu a:
"Offọdụ n'ime isiokwu ahụ bụ olu ọchụchọ dị ala ma ndị a nwere ike imetụta mkpebi ikpeazụ na mgbasa ozi gị, ya mere, ana m atụ aro ka ị wepụ mkpụrụokwu ndị a na ndepụta isiokwu gị."
Mgbe m dere ọzọ ịjụ maka nkọwa na isiokwu a ma ha nwere ike biko tụọ m aka n'ihe m nwere ike ịgụ iji nyere aka zere nsogbu ahụ n'ọdịnihu, ha enyeghị enyemaka ọ bụla. Agwara m ugboro abụọ ka m wepu obere isiokwu ọchụchọ dị obere ma mee ka mkpụrụokwu kwụsịtụrụ n'ihi na ndị a ga-enwe mmetụta na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe ụfọdụ. N'ihi gịnị?
Akaụntụ Google Adwords m anaghị arụ ọrụ ruo ihe dị ka otu afọ. Mana emechara m tinye $ 10 n'ime akaụntụ adwords m, mepụta mgbasa ozi maka weebụsaịtị ọhụrụ m. Na n’echi ya Google kwụsịtụrụ akaụntụ m. Emere m ha na email wee jụọ ha ihe kpatara ha ji kwụsị ya, ha deghachiri akwụkwọ wee sị na ha enweghị ike iwepụ ya, wee nye m ihe kpatara ya. M na-agụ iwu mgbasa ozi ha wdg, na ahụghị m ihe ọ bụla na-adịghị mma na mgbasa ozi m ma ọ bụ weebụsaịtị. Mgbasa ozi ahụ na-abanye na peeji nke ahịa m, ana m erekwa ngwaahịa ndị na-akwụwa aka ọtọ nke na-efu m puku dolla ole na ole ndị mmemme mepụtara. Eleghi anya Google Adwords anaghịzi ekwe ka ndị mmadụ jikọta ibe ahịa? Enweghị m ike ịkọwapụta nke a. M tinyere ọnụahịa nke ngwaahịa m na Ad ka naanị ndị nwere ike ị nweta ya ga-pịa njikọ ahụ. Ọnụahịa dị na Ad mere ka akaụntụ m kwụsịtụrụ? Nke a na-agbagwoju anya na-agbalị ịchọta ya. Enwere m ike ịkagbu akaụntụ, tufuo $ 10, wee bido akaụntụ ọhụrụ. Mana n'ime usoro ọ na - ekwu ma ọ bụrụ na akwụsịtụrụ akaụntụ ahụ ọ bụla akaụntụ ọhụụ ọ bụla m mepụtara ga - akwụsịtụ ruo mgbe ebighi ebi, agaghị m enwe ike ịkpọtụrụ ha ọzọ. Nke a dị nnọọ mgbagwoju anya.
Are bụ onye 100% ziri ezi banyere itinye adọkụọdị mgbasa ozi ezubere iche na usoro isiokwu - anyị nwere onye ahịa na azụmaahịa ụgbọ ala / rim na ọ na-akachasị ogologo ọdụ maka ha nwere okirikiri na okirikiri wiwi na-eme nke ọma na mkpokọta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka m lelee akaụntụ gị wee tụlee ụfọdụ aro zitere m ozi na simon.b@resultsdriven.org. ma ọ bụ anyị nwere ike ịtọlite ​​oku ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ekwentị 302-401-4478.